बच्चाहरु को हत्या गर्ने: एलेक्स र डेरेक किंग
दुई किशोर केटाहरू उनीहरूको बुबाको मृत्युलाई दोषी ठहराउँछन् दोषी
दुई किशोर किशोरी, 12 वर्षीया एलेक्स राजा र 13 बर्षीय डेरेक राजाको जीवन अचानक नोभेम्बर 26, 2001 मा बदल्यो, जब उनीहरूले आफ्नो बुबालाई बेसबल ब्याट्रीको साथमा पुर्याए, त्यसपछि आगोमा आगो लगाउँथे। हत्या गर्न को लागी।
आमाबाबु जो बच्चाहरू, एक वा दुवै आमाबाबुको हत्या, सामान्यतया मानसिक र भावनात्मक विफलता वा उनीहरूको जीवनको डरबाट पस्छ। 11 डिसेम्बर, भव्य ज्यारले दुबै केटाहरूलाई पहिलो-अर्काको हत्याको दोषी ठहराए।
उनी फ्लोरिडा राज्यको हत्याको आरोपमा सबै भन्दा सानो बच्चा थिए। यदि तिनीहरू दोषी पाएका छन् भने केटाहरू अनि अनिवार्य जीवन वाक्यहरू सामना गर्थे।
एक जोडीको रूपमा बाल-पलायन परिवारको मित्रले अलग-अलग परीक्षण सहित एक जोरदार, ड्रिल-आउट परीक्षणहरू गरेपछि केटाहरू तेस्रो-डिग्रीको हत्या र चक्रको दोषी ठहरिएका थिए। डेरेकलाई आठ वर्षको सजाय दिइएको थियो र एलेक्सलाई दुई वर्षको उमेरमा दुई अलग-अलग बालबालिकाको सुविधामा सजाय दिइएको थियो।
दुई केटाहरु अब वयस्कों हुन् जुन पछि आफ्नो वाक्यहरु लाई 2008 र 2009मा रिलीज गरे। यस बारे मा जान्नुहोस् कि यिनी केटाहरु लाई आफ्नो पिता र वयस्क मान्छे को हत्या को मामला मा संलग्न व्यक्ति को मारने को बारे मा अधिक जानें।
26 नोभेम्बर, फ्लोरिडाको एस्कम्बिया काउन्टीबाट फायरफाइटर्स छानेश्वरको चुप सडकमा पुग्यो, पेन्सेकोलाको उत्तरपूर्वी 10 किलोमिटरमा एक सानो समुदायले घर फर्केर कल गर्न प्रतिक्रिया दिए।
Muscogee रोड मा भएका घर पुरानो र काठ-फलाम भएका थिए। उनीहरूले पनि थाहा पाए कि घरको मालिक, टेरी राजा भित्र थियो।
जब फायरफाइटहरू घर पुग्यो, तिनीहरू मरेका थोरै ढोकामा घुम्न थाले र आगो फाल्न र बाँच्न खोज्ने कार्यको बारेमा गए।
एक कोठामा, तिनीहरूले खोजेका 40 वर्षीय टेरी राजा सोफेमा बसिरहेका थिए।
फायरफाइटर्सले सोचेका थिए कि उनी धुम्रपान वा अग्निको शिकार हुन्थे, तर छोटो परीक्षा पछि, यो स्पष्ट थियो कि तिनको सम्भावनाले उनीहरूलाई बारम्बार टाउकोमा झुन्ड्याउने चोटबाट मृत्यु भएको थियो। उनको खोपड़ी खुलिएको थियो र उनको अनुहार अनुहार झिक्यो।
बिहानै बिहान, आत्मघाती अन्वेषकहरूको एक समूह दृश्यमा थियो। जासूस जॉन स्यान्डर्ससन को मामला मा नियुक्त गरियो। छिमेकीहरूले सनन्डरसनलाई भने कि राजाको दुई जना छोराहरू, एलेक्स र डेरेक थिए। एलेक्स घरभित्र बस्दै थिए टेरीको रूपमा उनीहरूले अघिल्लो गर्मीको बेलामा गएर डेरेक मात्र केही हप्ताको लागि थिए। दुबै केटाहरू अब हराइरहेको थिए।
अनुसन्धानको शुरुवातदेखि रिक नामले सर्फिङ राख्ने नाम राख्दछ। स्यान्डर्ससन उहाँसित कुरा गर्न उत्सुक थियो र तिनलाई राजा परिवारको बारेमा के थाहा थियो। टेरी जान्थे मान्छेहरु मार्फत, स्यान्डर्सरले चीजहरू सुनेका थिए जुन राजा केटाहरूसँग 40 वर्षीया चभिस सम्बन्ध सम्बन्धी चेतावनी संकेत पठाउँथे।
27 नवंबर, टेरीको हत्यापछि एक दिन, दुई राजाका केटाहरूको खोजी अन्त्य भयो। "पारिवारिक मित्र" चाभिसले केटाहरूलाई पुलिस स्टेशनमा ल्याए। तिनीहरू अलग देखि साक्षात्कार भएको थिए र उनीहरूको कथाहरु रातमा के भयो भनेर टेरी राजा हत्या गरिएको थियो: उनीहरूले आफ्ना बुबालाई हत्या गरेका थिए।
यो पारिवारिक कथा के थियो?
टेरी र केली मारिनो (पहिले जेनेट फ्रान्सेली) 1 99 8 मा भेटिए र आठ वर्षसम्म सँगै बस्न थालें। तिनीहरू दुई केटाहरू थिए, एलेक्स र डेरेक। केली अर्को व्यक्तिले गर्भवती भए र जुत्ता केटाहरू थिए। सन् 1 994मा माथिका दुर्व्यवहारको इतिहास थियो जो माथिका, केलीले अभिलेख गरे, टेरी र सबै चार जना छोराछोरीलाई छोडे।
टेरी छोराछोरीलाई आर्थिक रूपमा प्रदान र हेरचाह गर्न सकेन। 1 995मा, जुलुसहरू अपनाए। र, डेरेक र एलेक्स विभाजित भएको थियो। डेकेक पेस हाई स्कूल, फ्रैंक ले, र उनको परिवार मा प्रिंसिपल संग चले गए। त्यो सेप्टेम्बर 2001 सम्म ले लेभ परिवार संग रह्यो। डेरेक विघटनशील भएको थियो र ड्रग्स मा शामिल भएको थियो, विशेष गरी हल्का तरल पदार्थ सघन। उहाँ आगोसँगको कुराकानी पनि गर्नुभयो। ढिलाइ डरलाग्दो थियो कि डेरेकले उनीहरूको अन्य छोराछोरीहरूलाई हानिकारक बनाउँथे ताकि तिनीहरू उनको छानेश्वरमा आफ्नो बुबा फर्किन्छन्।
एलेक्सलाई पादरी परिवारमा पठाएको थियो। पालक हेरचाहमा रहन एलेक्सको लागि काम नगरेको र उनी आफ्नो बुबाको घर फर्किइन्। टेरीको आमाको अनुसार, एलेक्स टेरीको साथ जीवन बिताउने आनन्दित देखिन्छ, तर जब डेरिनेर फर्कियो भने चीजहरू परिवर्तन भए।
डेकरले ग्रामीण क्षेत्रमा बाँच्न मन पराउनुभएन र आफ्नो पिताको नियमको अधीनमा जीवन बिताए। टेरी ले डेरेक ले रतालिन ले लिया, जसलाई उनले एडीएचडी को उपचार को लागी सालों को लागी लागेका थिए। यो डेरेकमा सकारात्मक असर भएको जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ उनीहरु थिए जब उनी आफ्नो बुबा तिर गहिरो असमानता देखाए। संगीत पनि डेरेक आक्रामक र अशिष्ट बनाउन लागेका थिए। फलस्वरूप, टेरीले घरबाट स्टेरियो र टेलिभिजन हटाउनुभयो। यसले डेरेकमा धेरै रिस उठ्यो र नोभेम्बर 16 तारिखमा 10 दिनअघि हत्या गरेको थियो, डेरेक र एलेक्सले घरबाट भाग्यो।
टेरीको चरित्रको रूपमा पिताको रूपमा एलेक्स र डेरेकको आमाले केटाहरूलाई सख्त, तर धेरै सज्जन, मायालु र समर्पित रूपमा वर्णन गरे।
कथामा अन्वेषणको रूपमा, जूरीले सिक्न थाल्नुभयो कि टेरीले शारीरिक रूपमा दुर्व्यवहार आफ्नो छोराछोरीलाई दुर्व्यवहार गरेनन् तर बच्चाहरूले उनीहरूको बुबाको ढोकाबाट धम्क्याउन थालेका छन् "ढिलो"।
रिक चाभिस, मनाईएको बाल Molester प्रविष्टि गर्नुहोस्
रिक चावेस र टेरी किंग धेरै वर्षसम्म साथी थिए। चाभिसले एलेक्स र डेरेकलाई थाहा पाए र कहिलेकाँही उनीहरूलाई स्कूलबाट उठाउँथे। केटाहरूले चाविसको घर वरिपरि फाँसीको आनन्द उठाए, किनभने उसले उनीहरूलाई टेलिभिजन हेर्न र भिडीयो खेल खेल्न दिनेछ।
प्रारम्भिक नोभेम्बरमा, टेरीले निर्णय गरे कि एलेक्स र डेरेक चाभिसबाट टाढा रहन चाहियो। उनले महसुस गरे कि उहाँ केटाकेटीको नजिक हुनुहुन्थ्यो।
तथापि, जब न्युजम्बर 16 मा टेरको घरबाट भाग्यो भने एलेक्सले उनलाई घर फिर्ता ल्याउन चाविसलाई फोन गरे। प्रहरीले रेकर्ड गरेको सन्देशलाई एलेक्सबाट फोनमा राखेका थिए जसले चाविसलाई आफ्नो बुबालाई बताउन आग्रह गरे कि उनीहरूले कहिल्यै घर आउँदैनन्।
प्रहरीले प्रश्न गरिसकेपछि चाभिसले भने, "टेरी धेरै सख्त थियो र मानसिक रूपमा केटाहरूलाई दुर्व्यवहार गरी लामो समयसम्म हेर्दै। उनले भने भने केटाकेटीहरू आफ्नो बुबाको हत्याको साथ केहि गर्न चाहन्थे, जसमा उहाँले सोचेका थिए, उनी अदालतमा गवाही गर्नेछन् कि उनी दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्। उनले यसो भने कि एलेक्सले आफ्नो बुबालाई मनपराउँदैनन् र चाहने व्यक्तिले उसलाई मार्न सक्थे। डेरेकले पनि टिप्पणी गरे कि तिनले आफ्नो पितालाई मरेका थिए।
जेम्स वाकर, एसआर, केटाकेटीको दाजुभाइ, बिहानको घडीमा राजाको घरमा देखा पर्यो, आगो बुझाए पछि। उनले सनसनसनलाई भने कि चाभिसले उहाँलाई बोलाए र तिनलाई आगोको बारेमा भने, टेरी मरेको बारेमा भने, र केटाहरू फेरि भाग्यो। चभिसले पनि भनेका छन् कि अग्निशमनहरूले तिनलाई टेरीको घरभित्र डुबाउँछन् र तिनले आफ्नो बिस्तारै जलाएको र अपरिचित शरीर देखे।
चेसिसले स्यानसनसनले साक्षात्कार गरेको पहिलो पटक, उनीहरूलाई सोधिएको थियो कि उनी आगोको केही समय पछि घरभित्रै बसेका थिए। उनले भन्यो कि उनले प्रयास गरे, तर अग्निशमनले यसलाई अनुमति दिँदैन। यो विरोधमा के उनले वाकरलाई भनेका थिए।
त्यसो भए उनीहरुका साथीहरुसँग भेटघाट गरेकी थिईन। उनीहरुका साथीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्। साक्षात्कार पछि, अन्वेषकहरूले चाविसको घर वरिपरी हेर्न खोजे।
तिनीहरूले चाभिसको बिउ माथि एलेक्सको तस्वीर देखेका थिए।
टेरी किंगको घरको खोजी एलेक्ससँग सम्बन्धित अर्कै पत्रिकामा एक पत्रिका भयो। यसमा चाभिसका लागि उनको "सदा" प्रेमबारे टिप्पणीहरू लेखिएका थिए। उनले लेखे, "रिक म मिलेर पहिले म ठिक थियो (sic) तर अब म समलैंगिक हुँ।" यसले अन्वेषण टोलीमा थप रातो झण्डा पठायो र तिनीहरूले रिक चाभिसको पृष्ठभूमिमा गहिरिंदै जान थाले।
चाभिसको आपराधिक रेकर्डमा एक चेकले 1984 मा लडाकु र दुई 13 वर्षका केटाकेटीहरूमा उत्साही आक्रमण गरे जुन उनले कुनै प्रतियोगिता गरेनन्। उहाँलाई छ महिनामा जेल र पाँच वर्षको परीक्षा दिइएको थियो। 1986 मा, उनको अभियोग खारेज गरिएको थियो र उनलाई चोरी र पेटी चोरीको दोषी पाए पछि जेलमा पठाइएको थियो। उहाँ तीन वर्ष पछि रिहा गरियो।
जब चभिसले पुलिस स्टेशनमा केटाहरूलाई छोडे, केटाहरूले आफ्नो बुबाको हत्या गर्न स्वीकार गरे। यो एलेक्स थियो जसले आफ्नो बुबा र डेरेकलाई मार्न को लागी यो विचार गरेको थियो जसले यो काम गर्यो। डेरेकको अनुसार, उनले आफ्नो बुबा सुतिरहेका सम्म पर्खाइन् र त्यसपछि एक एल्युमीनियम बेसबल ब्याट्री उठाए र टाउको र अनुहारमा 10 पटक टेरी झुण्ड्यो। एकमात्र ध्वनि टेरी बनाइएको एक गुर्गलिंग ध्वनि थियो, मृत्यु मृत्यु हो। त्यसपछि उनीहरूलाई अपराध लुकाउने प्रयास गर्न घरमा आगो लगाए।
केटाहरूले भनेका कारणले गर्दा उनीहरूले यो गरे कि उनीहरु दौडने को लागी सजायको सामना गर्न चाहँदैनन्। तिनीहरूले पनि उनीहरूको पिताले तिनीहरूलाई कहिल्यै मार्दैनन्, तर कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई धकेल्थे। तर तिनीहरूले वास्तवमा मनपराएका थिएनन् कि कहिलेकाहीं उनीहरूले तिनीहरूलाई कोठामा बस्न थालेका थिए। तिनीहरूले अन्वेषकहरूलाई बताए कि तिनीहरूले यसलाई मानसिक रूपमा अपमानजनक फेला पारे। दुवै केटाहरू हत्याको खुल्ला गणनाको साथ लागेका थिए र एक युवा हिरासत केन्द्रमा राखिएको थियो।
जब जर्ज ज्यारले केटाहरुलाई प्रथम-डिग्री हत्यामा दोषी ठहराए, फ्लोरिडाका कानूनले भने कि अभियुक्त वयस्कृतको रूपमा सजाय दिईयो। उनीहरूलाई तुरुन्तै वयस्क काउन्टी जेल पठाइयो उनीहरूको परीक्षणको लागि। रिक चावेस एक $ 50,000 बांडमा पनि जेलमा राखिएको थियो।
चाविसलाई बन्द-गोरको विशाल जूरीको दौडान केटाकेटीको गिरफ्तारीको बारेमा गवाही गर्न भनिएको थियो। तुरुन्तै, उनीहरूलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाइएको आरोप लगाईएको आरोप लगाइएको थियो। उनीहरूले आफ्नो बुबाको हत्या गरेपछि एलेक्स र डेकर लुकाउने आरोप लगाए।
यो विश्वास छ कि चभिस जेलमा हुँदा उनीहरूलाई जेल मनोरञ्जन क्षेत्रमा सिमेन्टमा सन्देश खरिद गरेर केटाहरूसँग कुराकानी गर्न खोजे। परिष्कार गर्नु अघि एक गार्ड द्वारा रोकियो। वाक्य पढ्न, "एलेक्सले विश्वास गर्दैन ..."
त्यहाँ पनि एक सन्देश थियो जुन चौधरी आयोजित भएको छानबिनमा होल्डिंग कोठाको पर्खालमा देखा पर्यो। यो एलेक्स र डेरेक थियो, उनीहरूलाई सम्झना गर्नेहरूलाई सम्झन र उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउन कि यदि तिनीहरूको गवाहीमा केही परिवर्तन भएन सबै कुराले काम गर्नेछ।
केही हप्ता पछि, एलेक्सको कचराको क्यान्सरमा एक लामो टिप्पणी फेला पर्यो जसले उनलाई आफ्नो कथा परिवर्तन गर्न नदिने र अन्वेषकहरूले मन खेलिरहेका थिए। उनले एलेक्सको लागि आफ्नो प्रेमलाई प्रोफेसर गरे र उनी सधैंभरिको लागि पर्खिरहेका थिए।
चभिसले सन्देशहरूको जिम्मेवारीलाई इन्कार गरे।
अप्रिल 2002 मा, राजा केटाहरूले आफ्नो कथा परिवर्तन गरे। तिनीहरूले बन्द-बन्द भव्य जरुरीमा चवाइस विरुद्ध दावी गरेका थिए। उनीहरूको गवाहीको तुरुन्तै पछि रिक चभिसले टेरी राजा, आर्सेन, र लुगा र प्रथम 12 वर्षको बच्चालाई 12 वर्ष वा पुरानो यौन ब्याट्री र प्रमाणको साथ छेउमा राख्ने गर्दछन्। चाविसले सबै चार्जहरूको दोषी ठहराएनन्।
रिक Chavis को परीक्षण
टेरी राजाको हत्याको लागि चावसको परीक्षण केटाकेटीको परीक्षणमा जान लागेका थिए। यो निर्णय भएको थियो कि केटाकेटीको निर्णय पछि पुगिसकेपछि चाविसको निर्णय बन्द गरिनेछ। केवल न्यायाधीश र वकीलहरूले थाहा पाउनेछन् कि चाविस निर्दोष वा दोषी पाए।
चावसको परीक्षणमा दुवै राजा केटाहरूले गवाही गरे। एलेक्सले भन्यो कि चाभसहरू केटाकेटीहरूसँग बाँच्न चाहन्थे र मात्र हुने गर्थे भने टेरी मरेको थियो। उनले भने कि केटाहरूले केटाहरूलाई यसो भने कि उनी आधी रातमा उनीहरूको घरमा बस्छन् र ढोका ढोका खोल्छन्। जब चभिस घर भित्र पसेपछि उनले केटाहरूलाई आफ्नो कारमा जाने, ट्रंकमा जानु, र उनीहरूको प्रतीक्षा गरे। चावस घर फर्केर फर्किए, त्यसपछि कारमा फर्किए, र त्यसपछि उनीहरूले उनको घर फर्के। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो कि उसले आफ्नो बुबाको हत्या गरे र घरलाई आगो लगाए।
डेरेक उनको गवाही समयमा धेरै विनाशकारी थियो र यसो भनिरहेको थियो कि उनी धेरै घटनाहरू सम्झन सकेनन्। उनले र एलेक्सले भने कि उनीहरूले आफ्नो बुबालाई मार्न चाहेको कारण चावसको रक्षा गर्न थालेको थियो।
फ्रैंक र नैन्सी ले लेतले पुष्टि गरे कि जब उनी डेरेक को बढावा मा रोक दिए र उनको पिता को लौटने को निर्णय ले गरे, उनले उनको साथ जाने को लागी आग्रह गरे। उनले एलेक्सले आफ्नो बुबालाई घृणा गरे र उसलाई मरेको हेर्न चाहन्थे। निन्सीले यस्तो पुष्टि गरे कि डेरेकले आफ्नो बुबाको घर जान्नुभन्दा अघि उनले तिनलाई बताए कि टेरीको हत्या गर्ने योजना पहिले नै काममा थियो।
यसले जारलाई5घण्टा लिनको लागि आफ्नो निर्णय पुग्यो। यो सील बनाइयो।
राजा भाइहरूको परीक्षण
चावेसको परीक्षणमा थुप्रै साक्षीहरूले राजा परीक्षणमा लियो। जब एलेक्सले आफ्नो आफ्नै रक्षामा गवाही गरे तब उनले प्रश्नहरु को जवाफ दिए कि त्यो चावस को परीक्षण को समयमा त्यहि तरिका को उत्तर दिए। उनले चाभिससँगको यौन सम्बन्धको सम्बन्धमा अधिक गहिरो कथन समावेश गरे र उनले उहाँलाई माया गरे किनभने उहाँ उहाँसँग हुन चाहन्थे। उनले पनि गवाही गरे कि यो चाभिस थियो, डेरेक होइन कि बल्ल घुमाई।
एलेक्सले बताए कि उनले र डेरेकले कथा पुनरावलोकन गरे कि उनी चाभिसको सुरक्षा गर्न पुलिसलाई जाँदै थिए। जब उनले सोधे कि उनले आफ्नो कथा किन परिवर्तन गरे, एलेक्सले उनी जीवनको लागि जेलमा जान चाहँदैनन्।
जूरी दुई अर्ब दिनमा जानीदिने निर्णयमा पुग्यो। उनीहरूले एलेक्स र डेरेक राजालाई हतियार बिना दोस्रो-हत्यारा हत्याको दोषी र आर्सेनको दोषी पाए। केटाहरू 22 वर्षको सजाय गरिरहेका थिए र हत्याको लागि जीवन र एक 30 वर्षको जेलमा आगो लिएको थियो।
न्यायाधीशले चाविसको निर्णय पढ्नुहोस्। उसले हत्या र आगो लगाइयो।
न्यायाधीशले केटाको सजाय बाहिर निकाल्छ
तथ्य यह है कि अभियोजकहरु दुवै चाविस र टेरी राजा को हत्या संग आरोपित राजा केटाहरु लाई अदालत को प्रणाली को लागि समस्याग्रस्त साबित भयो। अभियुक्तहरूले दुवै परीक्षणमा विवादित प्रमाण प्रस्तुत गरे। नतिजाको रूपमा, न्यायाधीशले आदेश दिएका थिए कि वकील र अभियुक्तले एकैचोटि भेट्टाउनको लागि आदेश दिए।
यदि तिनीहरू सम्झौतामा पुग्न असमर्थ भए भने, न्यायाधीशले निर्णय बाहिर फसेका थिए र केटाहरू पुन: पश्चात हुनेछन्।
हास्यको लागि पनि थप नाटक थप्न, कमेडियन रोजी O'Donnell, जसले धेरै देशमा मन पराउँछन् त्यो महिनाको लागि मामला पछ्याए, केटाहरूको लागि दुई जना कडा वकीलहरू भर्ती गरियो। यद्यपि, यस मामला मध्यस्थता भएको कारण अन्य वकीलहरूको कुनै पनि सम्भावना सम्भव थिएन।
14 नोभेम्बर, 2002 मा हत्याको मिति लगभग एक वर्षमा मध्यस्थता सम्झौता भयो। एलेक्स र डेरेकले तेस्रो-डिग्रीको हत्या र चक्रलाई दोषी ठहराए। न्यायाधीश डेरेकले आठ वर्षसम्म जेल सजाय गरे र एलेक्सले सात वर्ष जेल सजाय गरेपछि प्लस समयको लागि क्रेडिट।
चाभिस यौन सम्बन्धले एलेक्स मोर्चाको दोषी गर्दैनन्, तर झूटो कैदको दोषी। उहाँले पाँच-वर्षको सजाय पाउनुभयो। उनले पछि प्रमाण पाएपछि दोषीलाई दोषी ठहराएर दोषीलाई दोषी पाए, जसलाई उनले कुल 35 वर्ष पाएका थिए। तिनको वाक्य एकैचोटि भाग्यो। चाभिसको सम्भावना 2028 मा जारी हुनेछ।
Susan Atkins र S Sadie म्यू ग्लुट्ज
ग्यालटोटोको फोटो ग्यालरी
सीरियल किलर गारी माइकल हिल्टनको अपराध
चन्द्र लेवी को हत्या
बाल प्रेताटर नैथानील बार-योनाको प्रोफाइल
बीटीकेको कन्फिशनको अदालतको ट्राफिक
शीर्ष 10 लेडी गागा संगीत भिडियो
Java of Shailendra Kingdom
जापानी कान्जीमा सात घातक सिनेहरू कसरी लेख्न
गोल्फ कोर्समा 'कार्ट पथ मात्र' नियम
दसौं एवेन्यू उत्तर जीवनी
'तनाव' मुख्य कास्ट र क्यारेक्टरहरू
सेट थ्योरीमा दुई सेटहरूको फरक के हो?
Knossos मा पैलेस मिनोस
आत्मविश्वासबारे बाइबल पदहरू
'स्पंज स्क्वायरपैंन्ट' चित्र
आधिकारिक प्रोफाइल कस्तो छ?
सार्वजनिक मा स्तनपान मा सांस्कृतिक टेबोस को अन्वेषण
रङ जेल-ओ फलहरू
आर्थर मिलरको 'मृत्युको बिक्रीकर्ता' बाट प्रसिद्ध उद्धरण
के Epiphany दायित्वको एक पवित्र दिन हो?
बाल पोर्नोग्राफी कसरी रिपोर्ट गर्ने
जर्मनीमा 'बिटी' को धेरै अर्थ
बच्चाहरु संग लिथा मनाउने
के 'क्लीक' गोल्फ क्लब के थियो?
कन्कोर्डिया विश्वविद्यालय पोर्टल्यान्ड प्रवेश
मानवता र सुधार
Si Tu Veux - फ्रांसीसी अभिव्यक्तिले बताएको छ
Kirei - सरल जापानी वाक्यांशहरू
फोनेटिकमा नि: शुल्क परिवर्तन
टिभि डिनरको इतिहास
"रोड" कोर्मैक मैकार्टी द्वारा - पुस्तक समीक्षा
'पहिलो नोएल' क्रिसमस गीत
क्युबा राष्ट्रियहरूको लागि इन्स र ट्राग्रेसन नियमको बाहिर निकाल्ने एक गाइड